मेस्सीको गोलमा अर्जेन्टिनाको विजयी सुरूवात - Gandak News
बिहिबार ३६३७ जनामा कोरोना पुष्टि, २१ जनाको मृत्यु
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका – ८ बाट अवैध…
पोखरामा कपडा धुन गएकी महिला मृत अवस्थामा फेला
अन्नपूर्ण अस्पतालका ३ जना स्टाफ नर्ससहित पोखराका…
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले भन्योः…
व्यास नगरपालिकाको २ दिने नाबालकलाई कोरोना संक्रमण…
पोखरामा होम आइसोलेसन बसेका संक्रमितको अस्पताल…
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाका २ जनामा कोरोना…
कास्कीमा ट्याक्सीको ठक्करबाट ५ वर्षीय बालक गम्भिर घाइते
‘जनतालाई दशा, सरकारलाई दशैं !’, साझा पार्टीको विरोध प्रदर्शन
च्याम्पियन्स लिग: मेस्सीले कीर्तिमान रच्दा बार्सिलोनाको शानदार सुरूवात
गण्डकीका तीन जिल्लाका थप २२ जनामा कोरोना संक्रमण
तनहुँमा ७७ वर्षीया महिलासहित २ जनामा कोरोना पुष्टि
संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार: नेकपाकै नेताहरु नेपाल, खनाल, श्रेष्ठ, दाहाल
स्वास्थ्य मन्त्रीको दाबी- देशभर २६ सय आइसियू छन्, उपकरण अभाव हुन दिँदैनौं
मेस्सीको गोलमा अर्जेन्टिनाको विजयी सुरूवात
गण्डक न्यूज द्वारा २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०८:४७ मा प्रकाशित 0
फिफा विश्वकप २०२२ अन्तर्गत अर्जेन्टिनाले शुक्रबार विहान भएको खेलमा इक्वेइडरलाई १-० गोलले पराजित गरेको हो। अर्जेन्टिनाको जितमा लिओनल मेसीले गरेको गोल निर्णायक सावित भयो। मेसीले खेलको १३ मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए। त्यसपछि खेलमा कुनै गोल हुन सकेन। जितसँगै अर्जेन्टिनाले छनोटमा तीन अंक जोड्न सफल भएको छ ।
अर्को खेलमा उरुग्वेले चिलीलाई २-१ गोलले पराजित गरेको छ। खेलको ३९ मिनेटमा लुइस सुआरेजको पेनाल्टी गोलबाट उरुग्वेले अग्रता लिएको थियो। तर ५४ मिनेटमा चिलीका लागि एलेक्सिस साञ्चेजले बराबरी गोल फर्काउन सफल भए ।
बराबरीतर्फ अघि बढेको खेलको दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनेटमा उरुग्वेले गोल गर्‍यो। उसका लागि माक्सी गोमेजले गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई रोमाञ्चक जित दिलाए ।
छनोटअन्तर्गत पाराग्वे र पेरुले भने २-२ गोलको बराबरी खेलेर अंक बाढेका छन्। छनोटमा शनिबार विहान ब्राजिल र बोलिभियाबीच खेल हुनेछ ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका – ८ बाट अवैध लागुऔषध सहित…
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले भन्योः ‘कोरोना उपचारको…
व्यास नगरपालिकाको २ दिने नाबालकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
पोखरामा होम आइसोलेसन बसेका संक्रमितको अस्पताल लैजाँदै गर्दा…
अन्नपूर्ण अस्पतालका ३ जना स्टाफ नर्ससहित पोखराका थप ३० जनामा…
पोखरामा बिहानै १९ जनालाई कोरोना पुष्टि, गण्डकीमा…
पाेखरा पुम्दीकाेटमा ४० कराेड लागतकाे विशाल महादेव…
पोखराको मनिपालमा कोरोनाका कारण उपचाररत सशस्त्र…
पोखरामा फेरि २८ जनालाई कोरोना पुष्टि, गण्डकीमा ६७…
गण्डकीमा कोरोना अपडेटः मनिपालमा २५ वर्षीय सशस्त्र…
शनिबार पोखराका ३० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,…
‘रेड वाइन’ फिल्ममा पल र साम्राज्ञी…
सर्पले टोक्यो? के गर्ने, के नगर्ने ?
समीक्षा अधिकारी, प्रताप दास र आयुषा…